बजारमा २ घन्टामै रु. ५ अर्ब बढीको सेयर कारोबार Bizshala -
बजारमा २ घन्टामै रु. ५ अर्ब बढीको सेयर कारोबार
काठमाण्डौ । कारोबार खुलेको २ घन्टामै ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म १९७ कम्पनीका १ करोड ५६ लाख ५२ हजार ४२५ कित्ता सेयर ५ अर्ब ९ करोड ४८ लाख ९७ हजार १७६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो हिसाबले आज पनि बजारमा ९ अर्ब बढीको सेयर कारोबार हुने देखिएको छ।
हिजो ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो।
अहिलेसम्म नेप्से परिसूचक ८.३७ अंकको वृद्धिका साथ १९७६.६४ विन्दुमा पुगेको छ। अहिले जीवन बीमा समूहमा ५९३.६६ अंकले उकालो लागेको छ भने ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएर पोजेटिभ सर्किट लागेको छ।
माछापुच्छ्रे बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबीच टीएस
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) बीच...
काठमाण्डौ । लामो रस्साकस्सीपछि धितोपत्र बजारमा आएको कारोबार...
नेप्सेमा एनआईसी एसिया बैंकको १.८४ करोड बढी कित्ता बोनस सेयर
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई एनआईसी एसिया...
निफ्राको आईपीओलाई लक्षित गर्दै एनआईबीएल एस क्यापिटलले
काठमाण्डौ । नेपालकै इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ�...
यी ३० भाग्यमानी, जो प्रत्येकले पाउनेछन् निफ्राको ५३३३.३३
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित नेपालकै इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो...
नागरिक स्टक डिलरले संभवत अर्को साता लाइसेन्स पाउने
काठमाण्डौ । नागरिक स्टक डिलर कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक...
सेयर बजार होस वा अन्य व्यापार सबैको एउटै उद्देश्य हुन्छ– ‘नाफा...